Sapphire acha anụnụ anụnụ - nkume dị oké ọnụ ahịa - acha anụnụ anụnụ corundum - vidio
Tags Blue, Safaya
Sapphire na-acha bụ nkume dị oké ọnụ ahịa, ọtụtụ ihe ndị dị na mineral corundum, oxide oxide (α-Al2O3). Ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ, ma anụ ọhịa sapphires na-erukwa na odo, odo odo, oroma, na agba aja aja, sapphires dị iche iche na-egosi okpukpu abụọ ma ọ bụ karịa. Naanị agba nke sapphire apụghị ịbụ ọbara ọbara. Dị ka agba odo agba corundum bụ ruby, ihe ọzọ dị iche iche dị iche iche. A na-ekekọta corundum acha odo odo dị ka ruby ​​ma ọ bụ safaya na-adabere na mpaghara. Ụdị dịgasị iche iche nke agba bụ n'ihi nchọta ọtụtụ ihe dịka ígwè, titanium, chromium, ọla kọpa, ma ọ bụ magnesium.
A na-agbakarị, anyị na-egbutu sapphi dị ndụ dị ka nkume dị egwu ma na-eyi ya na ọla. Ha nwekwara ike ịbụ synthetics maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ihe eji achọ mma na nnukwu crystal boules. N'ihi ike siri ike nke sapphires. 9 na Mohs. Nke kachasi ike ịnweta, mgbe diamond na 10. Anyị na-ejikwa ụfọdụ ngwa ndị na-abụghị ihe ịchọ mma. Ndị dị otú ahụ dị ka ihe ndị na-ahụ anya nke ikuku. Igwe windo-ike. Okwute mgbagwoju anya na agba agba. Ihe igwe elekere di ezigbo mkpa. Ọ bụ dị ka ihe na-emepụta ihe dị iche iche na-arụpụta ihe dị iche iche.
Ụkpụrụ nkume ụcha na-atụgharị n'ọnọdụ hue, saturation, na ụda. Hue bụ àgwà dị ọcha nke nnukwu nkume. Saturation na-ezo aka na njirimara ma ọ bụ na-egbuke egbuke nke hue, na ụda bụ ìhè na ọchịchịrị nke hue. Sapphire bulu dị na ngwakọta dị iche iche nke igwe na-acha anụnụ anụnụ na nke abụọ, ọkwa dị iche iche na ụda na ọkwa dị iche iche nke saturation.
Anyị na-edepụta sapphires na ịdị ọcha ha na akpa ha. Ihe kachasị mkpa nke sapphi na-acha odo odo bụ purple, violet, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Violet na-acha odo odo nwere ike inye aka na njedebe mara mma nke agba, ebe a na-ewere na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị njọ. A na-ekwukarị na sapphi ọma na 15% violet ma ọ bụ odo odo na-adị mma. Grey bụ ngbanwe saturation nkịtị ma ọ bụ mkpuchi achọtara na sapphires na-acha anụnụ anụnụ. Grey na-ebelata saturation ma ọ bụ na-egbuke egbuke nke hue, ya mere nwere mmetụta dị oke njọ.
E nwere ike kọwaa ụcha sapphire acha anụnụ anụnụ dịka onye doro anya na-acha odo odo na-acha anụnụ anụnụ. Ebe oke mmanu acha anụnụ anụnụ bụ ma ọ dịkarịa ala 85% na nke abụọ hue karịa 15%. Na-enweghị ihe ngwakọta nke ihe na-acha odo odo ma ọ bụ ihe mkpuchi isi.
zụta sapphire eke na ụlọ ahịa anyị
Agba agba safaya
Tags Agba ịgbanwe, Safaya
Sapphire ezigbo sheen
Tags gold, Golden, Safaya